Prosper & Peace: October 2008
သူငယ်တန်း ကနေ ပထမတန်း တ၀က်ကို အမေ ဆရာမ လုပ်တဲ့ ကျောင်းမှာ တက်ရတယ်။ သူငယ်ချင်း တွေ တော့ မမှတ်မိ တော့ဘူး။
ပထမတန်း တ၀က်မှာ ပဲ ကိုယ့် အဖေ ဆုံးသွားတော့ နောက် တစ်ဝက် ကိုတော့ အိမ်နားက ကျောင်းမှာ အမေက ပြောင်းထား လိုက်တယ်။ မှတ်မိ တာတော့ သင်္ချာ အလီ တွေနဲ့ အပေါင်း အနှုတ် တွေကို မနက်တိုင်း ရွတ်ရ တာပဲ။
သုံးတန်း ရောက်တော့ သူငယ်ချင်း သင်းသင်းအေးနဲ့ ထမင်းစား ချိန်မှာ အမြဲ တူတူ စားတယ်။ သူက သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ အားလုံး ကို ခင်းကျင်းပြီး သိမ်းဆည်းတယ်။ ကိုယ်ကတော့ လေပေါ တာပေါ့။ လေးတန်း အစိုးရစစ် စာမေးပွဲ ဖြေတော့ သင်းသင်းအေးက စိတ်ကောက် ပြီး စကား မပြော တော့ဘူး။ ဟော့ရှော့ ၀တ်တဲ့ ကောင်မလေးကို စကား ပြောလို့တဲ့။
ငါးတန်း ကိုတော့ ကျောင်းကြီး ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးကျောင်း ကို ရွှေ့ရတယ်။ သူငယ်ချင်း အသစ် ရှာမယ်လို့ စဉ်းစား နေတုန်း အမေက နောက် တစ်ကျောင်း ကို ရွှေ့ပြန်ရော။
Posted by မီယာ No comments: Links to this post
အလုပ် ထဲမှာ ဘာပဲ လုပ်လုပ် target ကို အာရုံ ထားဖို့ ပြောလာတယ်။ အမြတ် အစွန်း မကြည့်သော အဖွဲ့အစည်း ဆိုပေမဲ့လည်း အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ် ရတာမို့ ဘာမှ အလကား မရပါဘူး။ ရတဲ့ ပိုက်ဆံက ကျောင်းသား ဘယ်နှစ်ယောက်အတွက်၊ အောင်လက်မှတ် ဘယ်နှစ်ခု အတွက်ဆိုပြီး target တွေ သတ်မှတ် ပေးပြီးသားပါ။
ကိုယ်က ကိုယ့် client ကျောင်းတက် ရဖို့နဲ့ အလုပ်ရဖို့ပဲ အာရုံ က ရှိတယ်။ ဆရာတွေ လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ စာသင်ဖို့ရယ်၊ ကျောင်းသားတွေ စာမေးပွဲ အောင်ဖို့ရယ်က အဓိကပေါ့။
target တွေ မပြည့်ရင် နားပူအောင် အပြောခံရတယ်။ စာတတန် ပေတတန်နဲ့ လည်း စာချခံရတယ်။ target မပြည့်ရင် ပိုက်ဆံတွေ မရဘဲ မင်းအလုပ်လည်း နောင်နှစ် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးလည်း ခြိမ်းခြောက် သေးတယ်။
အလုပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အမြဲ ပြောဖြစ်တာကတော့ ... target မရှိရင် သိပ်လွတ်လပ် မှာပဲလို့။
a feeling of certainty; trust in one's own ability (Oxford dictionary)
When do we feel confident?
How do we improve our confidence?
Is over-confident good?
I notice that children who get often praised are more confident than those who don't. One of the things I learnt about dealing with children is to praise them whenever opportunity arises. Even if it isasmall matter and does not seem to be perfect, children should be praised but not criticised. I also think that it is an act of love to praise. When we are inaloving environment we feel confident to act naturally, without any fear.
When I was young I overheard my mother responding to somebody who said that I sang beautifully by saying that I couldn't sang harmoniously with others. Needless to say, that incident stays with me and makes me doubtful about my ability to sing. Keeping track of our achievement can help us to improve our confidence and be positive of our future. However, achievement need not necessarily be tangible.
Over-confident at least, is better than under-confident -it is so much easier to survive.
ဒီ process ကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်သလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ထားလဲ၊
ဒီတခေါက်မှာတော့နောက်မန်နေဂျာတစ်ယောက်ပါတိုးလာတယ်။ chief executive အတွက်နောက်မဟာမိတ်တစ်ယောက်ပေါ့၊ အဖွဲ့အစည်းရဲ့အောင်မြင်မှု၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ကြိုးစားမှု၊ သစ္စာရှိမှုစတာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီမန်နေဂျာကဗြုံးခနဲဆိုငိုပါလေရော။
သူ့မှာဝန်ခံဘို့အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်တဲ့၊ သူအလုပ်ဝင်စမှာကျောင်းသားတွေရဲ့အဖြေတွေကိုပြင်ပေးဖူးတယ်တဲ့။ သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကလုပ်တာတွေ့လို့တဲ့။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာတော့သူရယ်၊ ကိုယ်ရယ် chief executive ရယ်မဟာမိတ်ဖွဲ့လိုက်ကြတယ်။ အားလုံးကိုတူတူရင်ဆိုင်ကြမယ်ပေါ့။
အခြေအနေနဲ့ အခွင့်အရေး ရလာရင်တော့ ငယ်ငယ်က မလုပ်ခဲ့ ရတာတွေ မသင်ခဲ့ရတာတွေ သင်ချင်တယ်။
သီချင်း ဆိုတာ ၀ါသနာ ပါပေမယ့် notes တွေမဖတ်တတ်ဘူး၊ ငယ်ငယ်က ဘုမသိဘမသိ နဲ့လိုက်ယောင်တာပဲ။
ပန်း အလှပြင် တာ ၀ါသနာ မပါပေမယ့် သူများ လုပ်ခိုင်းရင်တော့ သေသေချာချာ လုပ်ပေးတတ်တယ်။
ငယ်ငယ်က ရည်မှန်းတာ ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့၊ သွေးသံရဲရဲတွေ ခုထိ မကြည့်ရဲတာ ရည်မှန်းတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတာ တော်သေးတယ်။
ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာတွေ တထပ်တည်း ကျတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ဘ၀ဟာ ပျော်စရာနေမှာ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြစ်နေတဲ့ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ရင်း ပျော်အောင် နေလို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူချက်တာစားမဲ့အစား ဆားနဲ့သာစားလိုက်ချင်တယ်၊ မီးဖိုချောင်ရှင်းရတာမသက်သာလို့ဟေ့။
ကဗျာမဆန်တော့တာတော့မပြောနဲ့၊ အပြင်သွားရင်သူတလမ်းကိုယ်တလမ်းပဲ ဟန်ဆောင်မှုတွေ သည်းခံမှုတွေ ကင်းဝေးတဲ့ကိုယ်တို့ရဲ့ကမ္ဘာပေါ့ဟယ်။
ဒီပစ္စည်းကိုတင်ပေးပါလို့ပြောတုန်းကဂရုတောင်မစိုက်ခဲ့ဘဲ လိုချင်တော့မှ ထားခိုင်းတဲ့နေရာ (သူမထားခဲ့တဲ့နေရာ)မှာသွားရှာတယ်။
သူ့အမေအတွက်လက်ဆောင်ဝယ်ပြီးပြီလားလို့ လေယာဉ်ကွင်းရောက်မှမေးတယ်။ ပြီးတော့ပြောသေးတယ်၊ အဆင်ပြေတာသာဝယ်ပါတဲ့။
Posted by မီယာ 1 comment: Links to this post
ဒီနှစ်အလုပ်မှာ ရုံးသူရုံးသားအားလုံးအတွက် လူကြီးများကချပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လည်းအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ရတော့ အတွေ့အကြုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားချင်တာနဲ့ ဒီအကြောင်းရေးဖြစ်တာပါ။ ပထမတော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုသိပ်နားမလည်ပါဘူး၊ ရေလိုက်ငါးလိုက်နေမယ်လို့စိတ်ကူးနဲ့မသိလိုက်ဘာသာနေလိုက်တာပေါ့။
Management Coach နံမယ်က Carlos. သူနဲ့နှစ်ယောက်ထဲအရင်တွေ့ရတယ်။ သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းပြောပြီးနားလည်မှုယူတဲ့သဘောပေါ့။ သူကဒီ process မှာကိုယ့်ရဲ့ကဏ္ဍ၊ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်မှန်းချက်၊ လက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေရယ် ကိုယ်တို့chief executive ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါအကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတယ်။
၂နာရီကြာစကားပြောအပြီးမှာ (သူကပြောတာပိုများတယ်)ကိုယ့်ကို chief executive ရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်။
၁၉-၁-၇၉ - ၂၀-၁၀-၀၈
သူ့ကို ၁၉၊၁၊၇၉ သောကြာနေ့မှာမွေးခဲ့တယ်။ မွေးတုန်းကအသားဖြူတယ်လို့ပြောကြတယ်။
အမေကကလေး ၄ယောက်နဲ့မုဆိုးမဖြစ်ကျန်ခဲ့ပြီး၁လအကြာမှာကိုယ်ဝန်ရှိမှန်းသိရတာ။ ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေကကင်းဝေးပါစေလို့ရည်မှန်းပြီးသူ့နံမည်ကိုအမေကိုယ်တိုင်
ရွေးမှည့်ခဲ့တယ်။ အငယ်ဆုံးဖတဆိုးသားလေးမို့ အားလုံးရဲ့မေတ္တာတွေလည်းစုပုံရခဲ့တယ်။ အမေကဘယ်သားသမီးကိုမှမူကြိုမထားခဲ့ပေမယ့်သူ့ကိုတော့အစိုးရမူကြိုကျောင်းမှာ
ဆိုတဲ့ကျောင်းမှာအမေကထားခဲ့တယ်။ မူလတန်းမှာတော့သူ့ပညာရေးကအတော်ထဲမှာပါ။ တနင်္ဂနွေဥပုသ်စာဖြေကျောင်းကနေပြီးကျမ်းစာပြိုင်ပွဲတောင်ဝင်လိုက်သေးတယ်။
အဒေါ်တွေကဘောင်းဘီရှည်နဲ့ waist coat ချုပ်ပေးတယ်၊ ရှပ်အကျီင်္ိအောက်ခံနဲ့ဝတ်ဖို့ပါ။ မူလတန်းကျောင်းမှာပဲသူပေါင်းသင်းတဲ့သူတွေကနံမည်ကြီးပိုက်ဆံရှိသားသမီးတွေ၊
လာတယ်။ အမေကမပေးနိုင်မှန်းသိတော့ ရတဲ့ဆီကသူ့ဘာသာရှာတော့တာပဲ။
အလှအပလည်းကြိုက်တတ်လာတယ်။ သူ့ကိုယ်သူသပ်သပ်ရပ်ရပ်နေတတ်သလို အိပ်ရာနဲ့အ၀တ်ဗီဒိုကိုလည်းသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ထားတယ်။
အဖေငတ်တဲ့သားမို့ သူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူ ယောက်ျားလေးတွေကိုတခုတ်တရ
မကြာခင်မှာပဲ သူ့ကိုအနှိုင်းမဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တဲ့ အဖွားနဲ့အမေရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပဲ
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုကသူ့ကိုအလိုလိုက်ပြီး ဆက်လက်ကြည့်ရှု့ကြပါတယ်။
နေရာမှာနေဖို့အပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်။ သူ့နံမည်နဲ့မလိုက်အောင်ဘဲ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခြောက်နှစ်လောက်ခံရပြီး
Posted by မီယာ3comments: Links to this post
သူငယ်ချင်းကမြန်မာလို gtalk မှာပြောရအောင်ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ ဒီ Alpha Zawgyi ကိုရခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့်ပထမဆုံးမြန်မာလို post တင်ဖြစ်သွားပြီ။ မြန်မာဘလော့တွေနေ့တိုင်းဖတ်ပြီးအားကျခဲ့တာအခုမှပဲစရတော့တယ်။
ကျေးဇူးပါ ZW ရေ။
Congratulations KWK! You are well-deserved to getafull-time job inarecognised Institution like Brookes. I wish you all the success and happiness from today onwards. I hope all your other wishes will come true soon. Everybody is so pleased and happy for you. If you do your best God will do the rest.
Labels: Warm wishes
C S Lewis's house
It was by chance that I visited the C S Lewis's house. It wasabeautiful day so we hadagood walk. We went inside to see the house and the garden where we saw the punt. Later we walked to the pond and sat there foraminute and tried to imagine Lewis's life and his great creation. More information on C S Lewis can be found here.